China poncho orana mahafatifaty any ivelany ho an'ny ankizy mpanamboatra USD1.1-USD1.8 | mandrakizay
Ity ponco orana mahatsikaiky ity dia natao ho an'ny ankizy, manana endrika mahafinaritra sy loko marevaka izy, toa mahaliana sy mahafinaritra tokoa. Vita amin'ny PVC avo lenta izy io, ara-toekarena fa tsy tantera-drano, mateza ary mora entina. Mendrika ny mividy.
Namboarina tamin'ny akora avo lenta PVC, marevaka amin'ny hoditra ary tsy mora zaraina, mitafy mahatohitra ary maharitra ampiasaina.
Maivana sy mora entina, azo aforitra kely.
Sariitatra sariitatra mahafatifaty miaraka amin'ny loko mamirapiratra, ataovy mahafinaritra ny zanakao.
Anaran'ny vokatra Ponco miolakolaka ankizy ankizy
Color Yello, Mena, maitso na namboarina
Famantarana Manaiky pirinty namboarina
Type Akanjo jeneraly
Size 82 * 56cm na amin'ny fangatahana manokana
fonosana Kitapo 1 / opp, 50 pcs / baoritra
Fotoana santionany 7-10days
Previous: Akanjo an-jaza miaraka amin'ny Hood USD1.1-USD2.3
Manaraka: Tendrombohitra Polyester Rain'ny curved miaraka amin'ny hood USD5.3-USD9.9
3.Q: Azoko atao ve ny manontany santionany iray alohan'ny filaharana amin'ny toerana?
8.Q: Ahoana ny amin'ny ora fandefasana?
A: Matetika isika dia afaka mandamina ny fandefasana ao anatin'ny 25-35days. Miankina amin'ny habetsany ihany koa izany.
9.Q: Manana mari-pahaizana momba ny vokatra ataonao izao ve ianao?
A: Nanao fanandramana marobe momba ireo vokatra amidinay izahay izao. Toy ny SGS, BV, REACH, California 65. Fitsapana maimaimpoana 6P sns. Ary afaka manao ny lamba izahay ll araka ny fangatahanao, ny santionany amin'ny famokarana dia mety halefa amin'ny fanandramana alohan'ny fandefasana.
Pvc miaro ny orana Poncho
Pcoc Hunting Raincoat
Pvc Orana palitao
Ranon-dranon'olom-panavotana PE azo alefa maika
Rano aman-jaza tsy azo tanterahina azo tanterahina Unisex Rain Poncho ...
Azo ampiasaina PEVA Rain Ponchos miaraka amina Logo Logo Pr ...
Tendrombohitra Polyester Rain'ny curved miaraka amin'ny hood USD5.3 ...
Akanjo palitao EVA sariaka amin'ny tontolo iainana
Ankizy Pu Raincoat, Akanjo Peva, Pvc Poncho, Pvc Raincoat, Vehivavy palitao orana, Pu Raincoat,